LEGO Harry Potter Hogw အားလုံးကိုပြသသည်artအတူတကွခဏ
LEGO Harry Potter Hogw အားလုံးကိုပြသသည်artအတူတကွလက်ငင်းစာအုပ်တွေ
07 / 04 / 2021 07 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 828 Views စာ0မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစား, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည်, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ခဏ: Charm အတန်းအစား, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
အဆိုပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwarts Moment buildable စာအုပ်များကိုအတူတကွပြသရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည် - သို့သော်နောက်ဆုံးရလဒ်သည်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို ၀ ယ်ရန်အတွက်လုံလောက်သောမှော်အတတ်လား။
ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံလိုက်စုဆောင်းထားသောစာအုပ်လေးခုတွင်စားပွဲတစ်ခုလုံးအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာသည် - Hogw တစ်ခုစီအတွက်တစ်ခုarts house - စာသင်ခန်းကျယ်ပြန့်သောစာသင်ခန်းများထဲသို့ပွင့်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေး ဦး စလုံးအားတစ် ဦး ချင်းစီပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင်အောက်ပါလင့်ခ်များကို နှိပ်၍ သင်စစ်ဆေးနိုင်သည် -
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစား
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း
၇၆၃၈၆ Hogwarts ခဏ: Charm အတန်းအစား
ယခုမေးခွန်းမှာသူတို့မည်သို့စုဝေးကြမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမျှတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ပြီးပါက 1x2 rounded ပြားများနောက်ကျောဖုံးတွင်ကပ်ထားသောပြားများကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သူတို့မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိတယ် - စာအုပ်လေးခုစလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးပြသနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ် ၃၆၀ ဒီဂရီဒိုင်ရာမစ်မှာပြန့်ပွားဖို့ခွင့်ပြုဖို့ပါ။
အောက်တွင်ပြထားသောပြခန်းမှတစ်ဆင့်မည်သို့လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကိုကြည့်။ ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်သပ်ရပ်စွာတန်းစီထားသည့်အပြင်သပ်သပ်ရပ်ရပ် - သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တန်ဖိုး - ထွက်ပေါ်လာသည်။ သူတို့၏အသံတိတ်နေသည့်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဖန်မှုများသည်သူတို့ပိတ်ထားသည့်အခါတွင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သော်လည်းအဝါရောင်ဝဲလေသံက၎င်းတို့အားစည်းလုံးစေသည့်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအကွာအဝေးကိုဖယ်ထားရန်သင့်ရှေ့တွင်ရှိသောအရာများအတွက်ပေါင် ၁၁၁.၉၆ (လက်လီအရောင်းဆိုင်) တွင်သင်ပေးချေခဲ့သည့်အချက်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ Lego အစုံ သူတို့ဟာဘေးမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောတန်ဖိုးနဲ့တူတယ် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyဥပမာအားဖြင့်, သုံးဆကျော်စျေးနှုန်းထက် 10 ဆပိုခံစားရတယ် Lego.
သူတို့ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့တကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးသွက်လက်နေတဲ့ display ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကလူ ဦး ရေများပြားလာတာပါ။ ဟယ်ရီပေါ်တာ အက္ခရာများ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအရာမျိုးကိုဂရုစိုက်လျှင်, လည်းကစားရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါဆိုဒီကစားစရာကမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ )
ဒီတည်ဆောက်မှုမှာကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကနေရာလွတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထဲမှအနည်းငယ်သာအမြဲတမ်းမြင်ကွင်းတွင်ထားရန်နေရာရှိလိမ့်မည်။ Plus အား, သင်ကလှည့် turntable ပေါ်မှာ pop မဟုတ်လျှင်, သင်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဝက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမ။
ထိုရည်ရွယ်ချက်အရသင်သည်ဤစာအုပ်များကို၎င်းတို့၏မူလအရင်းအမြစ်နှင့်ဆင်တူသည့်ပုံစံဖြင့်သိမ်းထားချင်လိမ့်မည်၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်လုံးဝမှေးမှိန်သွားလျှင်ပင် ဟယ်ရီပေါ်တာ ၀ တ္ထုတိုများ - ပြီးတော့အဲဒီလိုလုပ်ရင်တောင်မှမင်းရဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့တွေးမိသွားတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤစုဆောင်းမှုကိုလုံးလုံးချန်ထားရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များတစ်လျှောက်တွင်သင်ထိန်းသိမ်းထားသကဲ့သို့ - သင်သည်၎င်းတို့ကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရှာရန်ကြိုးစားသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသေးငယ်သောအရာဖြစ်သော်လည်းသူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းစင်ပေါ်မှာတန်းစီတဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှုလည်းမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုအပြည့်အဝဈေးနှုန်းဖြင့်ကူးယူလိုလျှင်၎င်းကိုသင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်နေတာနေစဉ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ကလေးများနှင့် Lego မရောနှောပါ
Lego Star Wars 75292 Mandalorian Bounty Hunter Transport သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြန်လာသည် →